အဆိုတော်မျိုး ကျော့မြိုင် ၊သရုပ်ဆောင် ဒေါက်တာ သွင်ပပအောင် နှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြား | Freedom News Group
အဆိုတော်မျိုး ကျော့မြိုင် ၊သရုပ်ဆောင် ဒေါက်တာ သွင်ပပအောင် နှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြား
by FNG on April 30, 2010	Myo Kyawt Myaing Tie With Knot Thwin Pa Pa Aung မျိုးကျော့မြိုင် နှင့် သွင် ပပအောင် ဓာတ်ပုံ- လျှပ်တပြက် ဧပြီ ၂၉ ရက်နေ့ တွင် အသက် ၃၆ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည့် ရက်(ပ)အဆိုတော် မျိုးကျော့မြိုင်သည်
အသက် ၃၃ နှစ် အရွယ်ရှိ ဦးနှောက်နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ သွင်ပပ
အောင် နှင့် ဧပြီလဆန်းက တရားဝင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ပြီး နှစ်လ အတွင်း လက်ထပ်
မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ကျင်းပမည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
သတင်းဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်းများ နှင့် ယခုလဆန်းပိုင်းကတွေ့ ဆုံချိန် ထိအိမ်ထောင် ပြုမည့် အစီအစဉ်
ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိသည့် မျိုးကျော့မြိုင်၏ ချစ်သက်လျှာ သွင်ပပအောင် သည် ၁၉၉၈
ခုနှစ်က ဒါရိုက်တာ ဟိန်းစိုး ၏ အချစ် နဲ့ အတူ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်ကျော်က ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများ တွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နောက် မပြီးပြတ်သေး
သည့် ပညာရေး ကြောင့် သရုပ်ဆောင် လုပ်ငန်း နှင့် ပြန်လည် ဝေးကွာခဲ့သည် ဟု တွေ့ ဆုံမေးမြန်းမှု
တစ်ခု တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
သူမ သည် ပထမအိမ်ထောင် ရှိပြီး ကလေး တစ်ယောက် ရှိသည် ဟု တရားဝင် ပြောကြားထားသည်။
သူမက ဇန်န၀ါရီ လအတွင်း က အချစ်ဂျာနယ် နှင့် တွေ့ ဆုံရာတွင် ကြောင်ကမ္ဘာ ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး
နှင့် ပြန်လည် ရိုက်ကူးမည် ဟု ပြောသည်။
မျိုးကျော့ မြိုင် နှင့် သွင်ပပအောင် တို့ နှစ်ဦး၏ ချစ်သူ သက်တမ်းသည် ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်သည်ဟု
အဆိုတော် မျိုးကျော့မြိုင် သည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်က မိုးတွေ ရွာနေ ချိန် ခဏ ပွဲဦးထွက် တေးအယ်(လ)
ဘမ်ဖြင့် ပရိသတ် အားပေးမှု ရရှိခဲ့ပြီး အဆိုတော် ထွန်း အိန္ဒြာဗို နှင့် အတူ သီဆို ထားသည့် တကယ်
မချစ်ဘဲ နှင့် အယ်(လ)ဘမ်မှာ သူ၏ နောက်ဆုံးထွက် ရှိခဲ့သည် အယ်(လ)ဘမ်ဖြစ်သည်။
မျိုးကျော့ မြိုင် သည် ခောတ်ပြိုင် အဆိုတော်များ နှင့် စုံတွဲ သီဆိုမှု ရာ တွင် လူကြိုက် များသည့်
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်က ဇော်ဝင်းထွဋ် ၊ကျော်ဟိန်း တို့ နှင့် အတူ သီဆိုထားသည့် မော်ဒန် အန်တိတ်
၁၉၉၆ ခုနှစ် တွင် ၀င်သက်ထွက်သက် နှင့် ဗိုင်းရပ်(စ) အမည် ဖြင့် သီချင်း နှစ်ပုဒ်သာ ပါရှိ သည် ဆင်ဂဲလ်
အလ်ဘမ် အား ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသည်။
မျိုးကျော့မြိုင် သည် လက်ရှိ ဟစ်ဟောပ် ဂီတ လောက သာမက ပေါပ် ဂီတ လောက ကိုပါ သြဇာလွှမ်းမိုး
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← နာမည်ဆိုး ကြံ့ဖွံ့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန် ပါတီ အဖြစ်မှတ်ပုံတင်
ယူတု တွင် လူကြည့် အများဆုံး ဗီဒီယို အဖြစ် လေဒီဂါဂါ၏ Bad Romance နှင့် မီလေး ဆိုင်းရပ်(စ) Party in the USA တို့ ရွေးချယ်ခံရ →
မျိုးကျော့မြိုင် Home Make ခွေထဲကလားမသိဘူး၊ ဟုတ်တော့လဲကောင်းပါတယ်။
May 6, 2010	့honey phyo	#
May 5, 2010	gothic	#
After i read above comments bear in my mind to wrote this comment…i don’t know much about both of them(Myo kyaw M / T Pa pa aung).
i just want to say to people who wrote that above comments…open minded and live their life……what is your guys peoblems????i not understand why you guys wrote that kind of crap ?????Be open minded……….
May 4, 2010	casper	#
အရူးနဲ့ အရူးကုဆရာဝန်နဲ့ညားတာပေါ့ မျိုးကျော့မြိုင်က ဆေးချပြီးရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေလို့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာဆေးကုသနေတယ်လေ နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်မနဲ့ယူမလို့ဆိုပဲလက်စသတ်တော့ဒီလိုကိုး
May 2, 2010	janus	#
သွင်ပပအောင်ဆိုတာ အရင်တုန်းက ကျော်ဟိန်းနဲ့တွဲပြီး ပရိုဂျူဆာနီတိုးဆိုတဲ့ ကားမှာ တွဲပြီး သရုပ်ဆောင်တဲ့သူမဟုတ်လား။ ချမ်းသာကြည်စိုးဆိုတာ ဒါရိုက်တာ ကြည်စိုးထွန်းရဲ့သားမဟုတ်လား
April 30, 2010	သဲသဲ	#
ရေးပေး ပါ စာအုပ် လုပ်တဲ့ ချမ်းသာကြည်စိုး နဲ့ ဒီဆော်ကြီးက ငါးနှစ်လောက် ပေါင်းလိုက်သေးတယ်လေ
April 30, 2010	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,729,009 hits